Ho faranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT ! – MyDago.com aime Madagascar
Ho faranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT !	Magro 01 martsa 11
Nitohy toy ny mahazatra ny fihaonan’ny vahoaka Malagasy tsy mankatoa ny fanonganam-panjakana teto amin’ny an-kianjan’ny Magro Behoririka androany. Andriamatoa Constant RAVELOSON dia nasiaka tamin’ny kabariny, hisy hetsika lehibe rahampitso Alarobia hoy izy koa manainga ny vahoaka rehetra hamonjy izany. Ady ho an’ny Repoblikan’i Madagasikara no atao fa nobodoin’ny olona tokana ny fitantanana ny firenena hoy izy. Nambarany tamin’izany ihany koa fa matoa misy polisy politika (FIS) dia didin-jadona no manjaka eto. Araka izany, hoy ihany izy : ny filoha telolahy dia tsy maintsy manaraka ny dinika rehetra handaminana ny firenena. Namaly ny fanambarana nataon’ny Gal Ranto sy Gal Dolin ary Raharinaivo Andrianatoandro ihany koa izy, soniavo izay tian’ialahy isany soniavina na managana Repoblika ivelan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny vakiroaka hoy Constant, tsy hamidinay amin’ny fitiavana ny Repoblika hoy ity Mpampianatra ny taranja Filozofia ity.
Naneho ny heviny mikasika izay Sata Repoblikana izay koa Andriamatoa Mektoub, famerenana io Sata io no tanjontsika hoy izy ka safidy io na ny baroa na ny aran-dalana. Atomboka rahampitso ny famaranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT. Isika anefa misafidy na ho faty na ho velona hoy ihany izy. Misy tokoa ny mpamadika ny tolona ary tsy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana ihany , ka ny hahalavan’ny tolona no ahafantarana ny ratsy sy ny tsara. Nambarany ihany koa fa famotsiana vola maloto io vary mora io ary mpanao an’io asa io koa ny père Pedro ary satriny aza ho mahantra daholo ny vahoaka ka hipetraka any aminy.Koa raha misafidy ho faty isika dia ho andevozin’ny Frantsay sy ny FAT eto mandrakizay.
Eto Madagasikara no hanaovana ny dinika hamaranana ny krizy hoy kosa Rakotoamboa Jean Louis, na ilay na ny antsoina hoe malgacho-malagasy ka tsy hiverina intsony ny faniliana izay nitarika krizy lava reny ka raha matahotra an’izany I Andry Rajoelina dia ny mandeha any ivelany any no mety aminy, hoy hatrany izy.
Magro 01 martsa 11
Tolona tsy omby tratra ! Video Nolazain’i Manoela i Magro fa ho avy Ravalomanana + Photos Mampiady ny vahoaka Malagasy i Dr Simao ! Auteur Solo RazafyPublié le 1 mars 2011Catégories Magro, Malagasy, Militaires, Négos, Politique	7 pensées sur “Ho faranana ny nofy ratsy nentin’ny FAT !”	Ziry Onésime dit :	2 mars 2011 à 4 h 27 min	Misaotra anareo rehetra mpirai-tolona e!… Ho avy any izahay, ary hitaona ieo tapaka sy namana! Tsy maintsy ho voahilika io!
miora dit :	2 mars 2011 à 11 h 21 min	tena alefaso ny kamikazy fa tsy lasa intsony ity eh!
HoAiza dit :	2 mars 2011 à 12 h 43 min	Mangataka aminareo namana frantsay,
ianareo izay tsy mankasitraka sy manohitra ny asan’ireto FATin-doza manana toe-tsaina lozotra eto amin’ny firenena (gvt HAT) ireto,
ho anareo mety ho to-teny eo imason’ny Sarko: ny mba manokana ilôt frantay kely any ananonanona any, hipetrahan’ireto familles mafieuses ireto …
KintanaMananDrambo dit :	2 mars 2011 à 13 h 16 min	Mety ve Kely gelena ?
MDR !!! Sorry !
Bemafohy dit :	2 mars 2011 à 13 h 35 min	Hamafiso hatrany ny firaisan-kina ary harindraina tsara ny hetsika fa tsy haharitra io HAT io.
HoAiza dit :	2 mars 2011 à 14 h 48 min	ié
rams dit :	2 mars 2011 à 16 h 00 min	Ry Gasy manana fianakaviana sy havana voahitsakitsak’ity Jiolahy,
Tsy ny havantsika sy ny namantsika ihany no potika amin’izao fotoana izao, fa ny ala sy ny harena ambanin’ny Tany ihany koa no efa voavarotr’ireo mpanararaotra sy mpidongy toerana!!!!
Mitotongana amin’izany ny rafitry ny fanabeazana sy ny toe-karena, ka mbola ny havantsika sy ireo mpiray tanindrazana amintsika no tsy manan-ko hanina sy mijaly sy voatampim-bava ka tsy mahatohitra intsony !!! Isika rehatra mahalala sy mahafantatra ny tena fototry ny holana no antenain’izy ireo hamaha ny holana, ka samia mahatsapa fa raha mbola vitsy isika manana ny fitaovana fifandraisana toy ny INTERNET ao an-tanindrazana sy miparitaka aty ivelany, dia tsy manana fomba hafahany mifandray loatra ry ‘zareo any ka sarotra aminy ny manomana ny fihetsiketsehana isan-karazany !!!! Raha misy amintsika manana hevitra hanamorana izany ho azy ireo, dia miangavy ny tsirairay hanao izay vitany …
MITOHY NY TOLONA……
Précédent Article précédent : Video – Constant Raveloson, Magro 01/03/2011Suivant Article suivant : Questions ouvertes au GIC-M de la SADC et à toutes les chancelleries établies à Madagascar